သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပျေါတိုးနီးရနျးဘာသာစကားသင်ယူဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? မွို့၌မရှိဘာသာစကားကျူရှင်ဆရာများသည်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်မပေးပါတယ်! | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
Estonian အဘိဓါန်ဘာသာစကားအလွန်ရုရှားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရှုပ်ထွေးပေမယ့်အင်္ဂလိပ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တိကျသောမဟုတ်ပါဘူး။ အက္ခရာများနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်စာပိုဒ်တိုများသင်ယူဖို့, ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုပိုပြီးလွယ်ကူသွားပါလိမ့်မယ်အရေးအပါဆုံးအရာ။ သင်မကြာခဏတိုးနီးယားအတွက်ခရီးသွားလာသို့မဟုတ်အသက်ရှင်လျှင်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအသိပညာ၏ဘာသာစကားနှင့်အလေ့အကျင့်ကိုနားထောငျလျင်မြန်စွာသင်ယူသည်။ ငါတားလင်း, အတိုးနီးရနျးဖေတှငျနထေိုငျသညျ့အခါငါရှိသည်နှင့်တကယ်တိုးနီးရနျးဘာသာစကားအိမ်တော်၌ခဲ့ကြောင်းကကူညီပေးခဲ့4နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ ထိုကွောငျ့, ဤအရာအလုံးစုံအခြေအနေ, ငါသည်တိုးနီးရနျး3လတပြင်လုံးကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ရုရှားနိုင်ငံမှာတော့ပိုလိုအပျနိုငျ, ဒါပေမယ့်နေဆဲနေ့စဉ်သင်ခန်းစာများနှင့်အတူဝက်တစ်နှစ်ကယ့်ကိုတိုးနီးရနျးသင်ယူကြသည်။ ဒါကြောင့်အကောင်းကံ,
я так смекаю город — в эстонии ;.. один проезжий австриец истратил на русский аж целый месяц — чесал на русском только в путь ..начал.. с детей мы ничего понять не могли ч он там с подареньями, вкусностями и хорошим отношением у детей делать хочет? не педофил ли часом? оказалось -нет он себе не будь дурак нормальную невесту из сибирских девушек выбрал и.. увз.. но это к эстонскому как-то мало .. вс поняла?
66 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,250 စက္ကန့်ကျော် Generate ။